Kenya: Dhismaha Darbiga Xadka 75 Cisho Ayaa Lagu Dhameyn Doonaa – Goobjoog News
Kenya: Dhismaha Darbiga Xadka 75 Cisho Ayaa Lagu Dhameyn Doonaa
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in 75 cisho gudahood ay ku dhammeyn doonaan dhismaha darbiga ay ka dhiseyso xadka aan rasmiga ahayn ee ay la wadaagto Soomaaliya.
Guddoomiyaha Mandhera Fredrick Shisia ayaa sheegay in darbigan la dhameyn doono bisha January sanadka 2017, waana darbi dhirikiisu yahay 30 Km.
Waxa uu sheegay guddoomiyaha in tani ay qeyb ka tahay xoojinta dagaallada lagula jiro Xarakada Al-shabaab oo marar badan Mandhera weeraro ka geystay.
“Dib ayuu u billaaban doonaa dhismaha darbiga aan ka dhiseyno xadka inoo dhaxeeya innaga iyo Soomaaliya, 75 cisho ayaan dooneynaa in aan ku dhameystirno darbigan, si amniga gobolka iyo guud ahaan dalka Kenya u noqdo mid hagaagsan, waana qeyb kamid ah dagaallada aan kula jirno Al-shabaab” ayuu yiri guddoomiyaha.
Sidoo kale guddoomiye Shisia ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay ka hortagi doonaan weeraro walbo oo Al-shabaab isku dayaan iney ka geystaan gudaha dalka Kenya waa sida uu hadalka u dhigaye.
Kenya ayaa culeysyo badan kala kulmay Al-shabaab wixii ka dambeeyay markii ay ciidankooda soo galeen Soomaaaliya sanadkii 2011, waxaana gudaha Kenya ka dhacay qaraxyo iyo sidoo kale weeraro qorsheysan.
Roobka Gu’a Oo Ka Curtay Shabellaha Dhexe
IGAD: Qatarta Al-shabaab Wey Baahday
Shir uu ka qeyb galayo Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka furmay Adis Ababa
Nctbkm thfjbs Discounted cialis online buy generic cialis online
Nhwfjj udyuvs Discount cialis without prescription cialis coupon cvs
Nyxvtn rhkyhm Buy online cialis buy generic cialis online
Udymij kvloyy viagra pfizer cialis coupon walgreens
Nabadoon Lagu Dilay Degmada Waaberi Ee Muqdisho
help with writing a research paper - help write my paper che...
academia writers - write essay for money write essays online...
paperwriter - best essay writing websites essay writing site...
pay for term paper - http://payxessays.com/ need a paper wri...
academic writing blog - write my thesis write me a essay...